श्रीमान् समलिंगी भएको थाहा पाएपछि डाक्टरले सुसाइड नोट लेखिन् ! – Education Awardees
श्रीमान् समलिंगी भएको थाहा पाएपछि डाक्टरले सुसाइड नोट लेखिन् !
७ भाद्र २०७५, बिहीबार २०:३१
नयाँदिल्ली, ७ भदाै ।
आफ्नो श्रीमान समलिङ्गी भएपछि अल इन्डिया मेडिकल इन्सिच्युट (एम्स) की डाक्टर प्रिया वेदीले सुसाइड नोट लेख्दै आत्महत्या गरेकी छिन् । हृदयविरक सुसाइट नोट लेख्दै डाक्टरले गएको शनिवार आफ्नो प्राण त्यागेकी हुन् । विवाहपछि सजाएका सपना सबै भताभुङ भएपछि जीवन मरुभूमिमा परिणत भएको भन्दै आत्महत्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।मृत्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसाइड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सुसाइड नोटले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा अहिले हंगामा मच्चिएको छ । उनले फेसबुकमा लेखेको सुसाइड नोट नोट यस्तो छ :
डा. बेदी मैले तिमीबाट केही चाहिनँ । केही चाहेकी भए पाँच वर्ष तिमीसँग हुन्नथेँ । यत्ति चाहेकी थिएँ, तिमीसँगै रहन । किन थाहा छ, म तिमीलाई हदभन्दा धेरै माया गर्थेँ । तिमी यस्तो कुरा कहिल्यै महशुस गर्न सक्दैनौ, किनकि तिमी त अपराधी हौ । प्रियाले दिल्लीको एक होटलमा आराम गर्ने भन्दै पंखामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रूसद्वारा अहिलेसम्मकै विशाल सैन्य अभ्यास	२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:५०
जापानका प्रधानमन्त्री आबे पार्टी नेतृत्वमा पुनः उम्मेदवार	१० भाद्र २०७५, आईतवार २०:४०
पाकिस्तानमा बने २२ अाैं प्रधानमन्त्री इमरान खान	२ भाद्र २०७५, शनिबार १५:३८
प्रसिद्ध साहित्यकार भिएस नाइपलको निधन	२७ श्रावण २०७५, आईतवार २१:४२
क्यालिफोर्निया डढेलो फैलिनुमा दोषी : ट्रम्प	२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०८:०३
चीनको विकास रणनीति र भारतको ‘गाई कूटनीति’	१० श्रावण २०७५, बिहीबार १६:०२